Nhau - 2021 Quanzhou Kunze Kwekutengesa Seminari
Kuongororwa kwenjodzi dzeMutemo muInternational Trade Contracts-Gweta Huang Qiang
Inowanzo bvunzwa mibvunzo: kondirakiti kuumbwa, maitiro ekutengesa, ejensi nyaya, kunonoka kuendesa, zvemhando yepamusoro, zvekutengeserana mazwi, chikwereti huwandu, kudzosera offset, mutoro wekutyora chibvumirano, kunyangwe ichiita gakava rekutengeserana, nyaya dzeinishuwarenzi.
Chibvumirano chakasimbiswa: Nyaya 1 ndeyekuti fekitori yechibvumirano uye zita rekambani rakaratidzwa pachisimbiso harisi zita rekambani yemutengi, uye chibvumirano hachigone kushandiswa kusimbisa kusimbiswa kwehukama hwechibvumirano pakati pemapato maviri.
Nyaya 2 Chibvumirano chakasainwa nemutengi, uye chinokwana chewebsite yemutengi chakasiyana, uye kuzivikanwa kwemunhu wekutaurirana kuri kusahadzika. Mudzidzi wemubhadhari webhiri rekutakura, nhamba yefoni haienderane nemutengi, uye mutengesi haakwanise kuratidza kuti Manomwe azadzisa chisungo chekuendesa kumutengi uye kuti mutengi agamuchira zvinhu zvacho.
、 Wongorora mamiriro ekutanga emapato muchibvumirano
1) Zita: Zvinoenderana here? Kune tsamba dzakasiyana here? Kune akawanda kana mashoma mabhawa, madhi, nzvimbo, zvimwe zviratidzo, nezvimwe.
2) Bhizinesi chiyero: Kunyangwe icho chakatengwa chigadzirwa chinoenderana nebhizimusi hombe, uye munhu ari panjodzi yekubiridzira.
3) Email: Ndiyo email yemubatanidzwa here? Icho chinokwana chakanyatsofanana neicho mutengi chepamutemo chinomiririra? Icho chinokwana chakangofanana, uye mukana wekubiridzira wakakura. Muzviitiko zvakanyanyisa, mutengi haana kumbobvira anyoresa bhokisi retsamba remakambani, uye wechitatu achibiridzira.
4) Nhamba yeakaundi yekubhadhara: Tarisa kuti dzakanyatsoenderana here, uye hapafanire kuve nemisiyano muzviratidzo.
5) Kero yakanyoreswa: Iyo ndeya imwe nyika kubva kumutengi (senge United States, nyika dzakasiyana dzinogona kunyoresa makambani ane zita rimwe chete rakafanana)? Inenge iri yenyika dzakasiyana (senge Uganda neKenya, iine zita rimwe chete asi nyika dzakasiyana, haifanire kunge iri kambani imwe chete?
6) Consignee: Pane njodzi huru here yekuti zvinhu zvigoendeswa kune imwe nyika yechitatu? Kana izvo zvinhu zvikaendeswa kune wechitatu bato, pane iwo akajeka mirairo kubva kumutengi!
7) Kusaina kwemutengi; ndiye munhu anotungamira / mumiriri wemutemo? Nderomumwe munhu here, pane gwaro rekubvumidza? Kana iyo isingakwanise kuve yakasimbiswa, iko iko kwechokwadi kwekutengeserana kunosimbiswa kuburikidza nemutengi zviri pamutemo ruzivo rwekuonana?
1) Webhusaiti yepamutemo yemutengi, makambani mazhinji anenge aine (zviitiko zvakanyanya zvakaona hunyengeri hwewebhusaiti) 2) Tora mushumo wemutengi wechikwereti.
Hurumende yeruzhinji bhizinesi ruzivo chikuva chenyika yemutengi.
United States: SEC.gov kana New York Secretary of State Corporation uye Bhizinesi Bhizinesi Tsvaga United Kingdom: Makambani House, www.gov.uk
India: Ministry of Corporate Affairs Bazi RezveMabhizimusi Enyika
Singapowo; Accounting uye Corporate Administrationwww.agra.gov.sg
1) Iyo nguva yakabvumidzwa yemhando yekupokana inobatsira uye haina chakaipa
2) vakabvumirana kuongorora mazwi
Jekesa masangano ekuongorora, nzira dzekuongorora, zviyero zvekutarisa, nezvimwe.
3) Kunyatsoita zvisungo zvekutarisa kudzivirira kusagadzikana kwemhando yepamusoro
Chechitatu-bato kuongorora kufekitori, uye rimwe bato rinosimbisa kuti hapana dambudziko muhutano usati watumirwa. Samples akaiswa mucherechedzo wekuenzanisira kuongorora, uye zvitupa zvekuenderana kubva kumahofisi ehurumende zvinowanikwa.
4) Teerera kuchengetedzwa kweuchapupu hwakanyorwa.
Mutengi ari kubatsira mamwe makambani kutenga seanoshanda. Kana paine matambudziko, mutengesi anogona kusarudza munhu ane basa (mutengi mutengi, kana iyo chaiyo yekutenga kambani, asi inofanirwa kuverengerwa uye kubvumidzwa nechikwereti vimbiso). Kana yangosarudzwa, haigone kuchinjwa.
1) Yekupedzisira mubhadharo wekupedzisira wabvumidzwa pamusoro. Iko kuongorora kune mamiriro akasungirirwa uye chibvumirano hachina kujeka?
2) Akawanda akawanda ekutumira maodha mumabatch, teerera kuyananisa panguva yakakodzera nemutengi kuti asimbise huwandu hwechikwereti
3) Teerera kuenzanisirwa yenguva yekubhadhara uye mari yechikwereti nemuganhu wechikwereti unobvumidzwa neChina Chikwereti Inishuwarenzi.
Zano rekudzivirira njodzi dzekutengeserana neUnited States
1) Wedzera imwe inishuwarenzi
2) Kana iwe uchikwanisa kuzvivimbisa
3) Simudza ruzivo rwekudzivirirwa kwekodzero zviri pamutemo
4) Kubvunza uye kuongorora kwevatengi zvinodiwa
China Kiredhiti Inishuwarenzi Diki uye Micro Dhijitari Zvigadzirwa neMasevhisi, HP Pocket: Ruzivo Service Package, Seavo World APP, Diki uye Micro Academy.
1) Kutsvaga vatengi vekunze kwenyika
2) Kuongorora njodzi uye yambiro yekutanga
3) Ziva njodzi dzevatengi vekunze kwenyika.
Mukupedzisa, isu tiri mugadziri uye zvakare iri kambani yekutengesa pazvinhu zvepasi pemotokari, izvo zvinhu zvatinofanirwa kunetsekana hazvisi zvekungopa vatengi vedu vanovimbika idlers, mapuroti, ma roller, track link assy uye zvimwe zvikamu asi zvakare inofanirwa kuve nenjodzi pane yekutengesa.
Chete nenzira iyi ndiyo inogona kuona kuhwina-kuhwina bhizinesi uye kwenguva refu mushandirapamwe.
Post nguva: Jul-18-2021